Ukuhanjiswa KWAMANQAKU-eShenzhen Yonwaytech Co, Ltd.
Qaphela ngaphambi komyalelo:
(1) Iinxalenye zibandakanyiweImodyuli ye-LED, intambo yomqondiso phakathi kweemodyuli, intambo yombane phakathi kwemodyuli kunye nokunikezelwa kwamandla.
(2) Thenga iimodyuli zebatch efanayoukuthintela ukuqaqamba nokwahluka kombala kwiscreen esinye, kuya kufuneka uthenge iimodyuli zebhetshi efanayo. Oko kukuthi, kuya kufuneka uthenge iimodyuli kwiscreen esinye ngomyalelo omnye kuthi.
(3) IsilumkisoIimodyuli zethu ze-LED ngekhe isetyenziswe njengezixhobo zokubonisa umboniso wakho we-LED omdala. Thina sukubonelela ngenkxaso yobugcisa okanye inkonzo ukuba usebenzise iimodyuli zethu ze-LED ukubuyisela iimodyuli ze-LED ezindala.
(4) UmrhumoIxabiso lethu alibandakanyi nayiphi na intlawulo okanye uxanduva kwindawo ekuyiwa kuyo, kuya kufuneka ungenise imvume yokungenisa elizweni kwaye uhlawule lonke uluhlu lweerhafu okanye imisebenzi yalapha.
1. Ixabiso lamaxabiso ezinto alibandakanyi iindleko zokuhambisa Ungajonga iindleko zokuhambisa kwiphepha leenqwelo zokuthenga emva kokuba ukhethe ubungakanani bento kunye nendawo ekuyiwa kuyo.
Ukucaciswa kwe-2.DHL yindlela emiselweyo. Ezinye ezinje nge-EMS, i-UPS, i-FedEX kunye ne-TNT ziya kwamkelwa kuphela xa i-DHL ingafumaneki okanye ingalunganga kwindawo ekuyiwa kuyo; Ukuba ufuna ukuthumela iimpahla ngolwandle okanye ngenqwelomoya, nceda unxibelelane nathi ngeenkcukacha.
3. Siza kuqhubeka ne-oda yakho zingaphelanga iintsuku ezimbini zomsebenzi emva kokufumana intlawulo. Siza kuphinda sikwazise ngolunye usuku olukhawulezayo lokuhambisa ukuba iimpahla ziphelile.
4. Sithumela kuphela kwidilesi eqinisekisiweyo yomyalelo. Ke idilesi yakho kufuneka ihambelane nedilesi yokuthumela. Nceda qinisekisa idilesi yokuhambisa kwiakhawunti yakho xa uhlawula yiWester Union okanye abanye.
5. Ixesha lokuhambisa ngenqanawa linikezelwa ngumphathi kwaye alibandakanyi impelaveki kunye neeholide. Ixesha lokuhamba linokwahluka, ngakumbi ngexesha leholide.
6. Nceda usazise ukuba ufuna ukuthoba ixabiso lemveliso kwi-invoyisi yokuhambisa ukuze uphephe okanye unciphise uxanduva lwesiko kwicala lakho. Ukuba akunjalo, siya kusebenzisa eyona mali ihlawuliweyo.
7. Ukuba kuyimfuneko, nceda uncedise ikhuriya ngoncedo olufunekayo malunga nokuvunywa kwempahla ethengiswayo.
8. Nceda ujonge izinto phambi kwekhuriya xa zifika. Ukuba iimpahla zonakalisiwe, nceda uzame ukufumana ubungqina obubhaliweyo bokuphuka, okwangoku, nceda usithumelele iifoto okanye iividiyo zokupakisha kunye neemveliso ngokukhawuleza.
9. Ukuba awukafumani ngenqanawa yakho ngeentsuku ezili-15 ukusukela ngomhla wokuhlawula, nceda unxibelelane nathi. Siza kulandelela ukuthunyelwa kwaye sibuyele kuwe ASAP.
10. Iimveliso ezi-odolweyo aziyi kukonwabela ukubuya kunye newaranti ukuba iikhowudi zazo zikhululwe.
11. Sinikezela iwaranti esemgangathweni yeminyaka emibini uninzi lweemveliso zethu ezithengisiweyo (imigaqo ekhethekileyo ixhomekeke kwi-Invoice yokugqibela yeProforma.).Ukuba kukho naziphi na iziphene phantsi kokusetyenziswa kwesiqhelo ngeli xesha, siya kulungisa okanye sitshintshe simahla kumzi-mveliso wethu. Abathengi banoxanduva lokuthumela ngenqanawe.